Qibla Map Finder app for android | APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အစ္စလာမ့် Apps ကပ » Qibla မြေပုံ Finder ကို, ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ & Qibla Compass
မှတ်စု: Qibla Compass works only in those device, which supports magnetometer in hardware. For accurate measurement, Keep your device flat and ataeffiecient distance from electromagnetic fields for precise pointing.
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အကြံပေးချက်ကိုပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါ၊ သို့မှသာဤကဲ့သို့သောအစ္စလာမ်မစ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုတည်ဆောက်နိုင်သည် သင်၏အကြံပြုချက်များကို E-mail, Facebook, Twitter သို့မဟုတ် Google+ တို့မှကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ချင်ပါသည်
တွစ်တာ - https://twitter.com/QuranMp3_App
- အသေးအဖှဲကိစ္စများ Fixed ။
Qibla မြေပုံ Finder ကို, ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ & Qibla Compass
11.20 ကို MB